Owesifazane uncoma eyokuzibandakanya kwezemidlalo | Eyethu News
Owesifazane uncoma eyokuzibandakanya kwezemidlalo
“Kumnandi ukuba owesifazane ozibandakanya nezemidalo”
Umdlali webhola lomqakiswano i-Netball uNksz Phumelelo Hlongwa (25) kwa- N eMlazi. Isithombe:Sithunyelwe
UMDLALI webhola lomnqakiswano i-netball uPhumelele Hlongwa (25) wakwa N eMlazi uthi kumnandi ukuba ngowesifazane ozibandakanya kwezemidlalo ngoba kumnika ukuzethemba futhi ubanomqondo ovulekile nangezinto ezakhanayo empilweni.
Lona owesifazane osemncane uthi waqala ukudlala inetball esafunda emabangeni aphansi Emthethweni Primary School kwa P ngo 2001 kuya ku-2007 akayekanga, uqhubekile nalomdlalo esefunda Ogwini Comprehensive kuso lesi sigceme.
Uthi uphinde abe yilunga leqembu Umlazi Netball elingaphansi kuka Nksz Gugu Maphumulo okunguyena obaqeqeshayo.
“Ngawuthanda lomdlalo ngabona ukuthi nginekhono lawo, ngazama ukudlala eminye efana nokugijima nebhola lezinyawo kodwa ngagxila kakhulu kwi-netball.”kusho okaHlongwa.
Uqhube wathi: “Kubalulekile ukwenza ezemidlalo ngoba zikukhipha ezintweni ezibhedayo ezifana nokuthi intsha izifaka ezidakamizweni nasophuzweni oludakayo nokuthanda abafana kakhulu”.
Uthi amathemba awasekho ngoba uma usuneminyanga engama-21 kunzima ukuthi ungene kwi-SA Team kodwa kusengenzeka ngoba akwenzeki,useyidlala ukuze azigcine ematasa ngoba uyakuthanda.
“Ngithanda ukugqugquzela izingane ukuba zizibandakanye kwezemidlalo zisesesikoleni ngoba kubalula uma uqale usemncane ukuze ekuhambeni kwesikhathi kuzokuvulela amathuba okuthola umfundaze wokufunda emanyuvesi”, kusho lo mdlali.
Uthi muva nje kade bedlala emiqhudelwaneni iSpar National Netball Championships obusingethwe wuMasipala weTheku eHoy Park ngempelasonto.
Uthi bazilolongela e-Indoor Sports Hall njalo ngoLwesibili nango Lwesine eKing Zwelithini Stadium ngo 4 ntambama.
Owesifazane udunwe imoto phambi kwasekhaya